Ireo loko 5 ampiasaina amin'ny doka | Famoronana an-tserasera
Ireo loko 5 ampiasaina amin'ny doka
Antonio L. Carter | | maro
Mahalala ny fomba loko misy fiatraikany amintsika dia iray amin'ireo filan'ny tontolon'ny dokam-barotra ary vokatr'izany famolavolana. Ny orinasa sy ny orinasa dia manao fandalinana matetika momba ny psikolojia loko ary ny fiantraikan'ireto loko ireto amin'ny filantsika ara-pientanam-po, satria mbola siansa mbola eo amin'ny fivoaran'ny fivoarana izy, satria ny fandrosoana amin'ity sehatra ity dia amin'ny tranga maro tombantombana.
ny zavakanto farany of the vokatra sary ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing dia tsy maintsy averina amina fitaovana, endrika ary haino aman-jery isan-karazany, Multimedia na tsia, ataon'izy ireo izany mba hahombiazan'ny zava-drehetra dia mila manatsotra ianao fa tsy mitady tongotra 3 mankany amin'ny saka. Noho io antony io sy ny maro hafa, ankehitriny dia entiko amin'ny tsiron'ny mpihaino rehetra ianao, Ny loko 5 ampiasaina indrindra ao dokam-barotra.
Ireo vokatra dia mamolavola ny fonosany hisarihana ny sain'ny mpampiasa ary ny loko dia iray amin'ireo fananany lehibe.
Ny siansa an'ny fandalinana loko, dia mandroso tokoa noho ny filàna iray manontolo orinasa, Famolavolana amin'ny ankapobeny, mba hanatsorana zavatra sarotra amin'ny tenany, loko. ATSINANANA fandalinana loko, dia namela anay ireo teôria sy teôria azo ampiharina sy ampiasaina toa ny an'ny Eva heller, na zava-mahatalanjona toy ny Steganography, fomba iray hanaingoana sary sy hafatra amin'ny alàlan'ny mifangaro loko, izay miresaka momba an'io Cryptostagram,zarao am-pitandremana sy fomba fanao ny sary sy ny hafatrao.
Androany aho tonga hitondra anao a fianarana kely ny loko bebe kokoa ampiasaina ho loko orinasa amin'ireo marika malaza indrindra manerantany. Ireo loko ireo dia ampiasaina matetika hanavahana sy hanavahana ny marikao amin'ireo mpifaninana, ary hampitana hafatra tsy misy soratra amin'ny mpanjifa.
Ny loko mena no be mpampiasa indrindra amin'ny doka ankehitriny.
Ary ireto loko ireto dia:
Loko iray maneho izany hery, fisarihana ary mahavita mitazona ny sain'ny mpanjifa. Izy io dia loko manintona sy manintona, io no be mpampiasa amin'ny marketing. Ampiasaina amin'ny vokatra mpanjifa toy ny zava-pisotro sy trano fisakafoanana an'ny fast food.
Izy io dia loko izay mampita milamina, matokia ary miala sasatra. Izy io dia fantatra amin'ny maha-lokon'ny lanitra sy rano, izay mahatonga azy hahafantatra bebe kokoa. Amin'ny feo maizina dia maneho izany fahamendrehana sy fahombiazana, ary amin'ny tononkira maivana dia manome fahasalamana sy fahatanorana. Ampiasaina amin'ny vokatra fahadiovana ara-teknolojia na manokana.
Izy io dia loko izay manondro ny natiora ary mampita soatoavina ekolojika. Izy io dia loko ampiasaina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana sy fikasana tsara. dia marobe, tsara ary milay. Izy io dia loko izay miasa matetika tsy misy hadisoana.
Ny lokony mampidi-doza, marefo ary mamiratra. Mora manintona ny sain'ny tsenan'ankizy izany, amin'ny ankizilahy betsaka noho ny zazavavy, fa mampita fahasambarana sy hazavana be dia be. Ny lokony miavaka amin'ny vahoaka.
Ny loko izay heverina ho mavitrika dia ampiasaina amin'ny fampiroboroboana ny vokatra fanatanjahan-tena, zava-pisotro misy angovo ary vitaminas. Izy io dia loko manosika foana fanavaozana sy fahatanoranad. Ny olana amin'ity loko ity dia ny fampiasan'ny orinasa klasika azy io mba hanomezana fahatsapana diso, indraindray very fitokisana.
Fanazavana fanampiny -Cryptostagram,zarao am-pitandremana sy fomba fanao ny sary sy ny hafatrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ireo loko 5 ampiasaina amin'ny doka
Tsy misy sary dia hoy izy:
Izaho irery ve no tsy mahita ny sary? Heveriko fa diso ny làlan-dry zareo ary tsy afaka aseho amin'ny mailaka koa izy ireo.
Mamaly amin'ny Tsy misy sary
Carolyn Davidson sy ilay swoosh